२६ करोड रुपैयाँको औषधि असफल, उपचार पछि पनि ११ महिनाकी बालिकाको मृ’त्यु ! – Online Khabar 24
२६ करोड रुपैयाँको औषधि असफल, उपचार पछि पनि ११ महिनाकी बालिकाको मृ’त्यु !
संसारकै सबैभन्दा महंगो २६ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने औषधिले पनि ११ महिनाकी बालिकालाई बचा’उन सकेन । यी बालिकालाई यो अत्यन्तै महंगो पर्ने औषधिको सु’ई लगाइएको थियो तर यी बालिका वेदिका शिन्देको मृ’त्यु भएको छ । **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
आइतबार राती सास फे’र्न सम’स्या भएपछि उनलाई पुणेको एक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । अबेर राती उनको मृ’त्यु भएको छ । महाराष्ट्रको पिंपरी चिंच’वाडका सौरभ शिन्देकी छो’री वेदिकालाई स्पाइनल मस्कुलर एट्रफी (एसएमए) नामको जेनेटिक स्वा’स्थ्य स’मस्या थियो ।
उनको उप’चारको लागि उनका मातापिताले क्राउड फण्डिङमार्फत हजारौं जनाबाट सहयोग उठाएर २६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेर अमेरिकाबाट जोलगेन्स्मा नामको इन्जेक्सन मगाएका थिए । यो रो’गको यही अन्ति’म उ’पचार मानिन्छ । वेदिकालाई जुन महिनामा यो इन्जे’क्सन लगाइएको थियो । त्यसपछि पूरै परिवार निकै खु’सी थिए र वेदिकाको कहानी सामाजिक संजालमा निकै भा’इरल भइरहेको थियो ।
यो खुसी धेरै दिन टिक्न सकेन र वेदिकाले आइतबार संसारबाट वि’दा लिइन् । वेदिकाको यसरी मृ’त्यु भएपछि परिवार र उनलाई सहयोग गर्नेहरु शो’कमा छन् । यति महंगो औषधि दिइसकेपछि पनि वेदिकाको मृ’त्यु कसरी भयो भन्ने विषयमा मानिसहरु प्र’श्न उठाइ’ रहेका छन् ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
Prevमलाई डिभोर्स देउ भन्दै आए एक पुरुष,श्रीमतीले यतिसम्म गरेपछि सहेर बस्न सकेनन् (भिडियो हेर्नुस्)
nextसाम्राज्ञीको यो गीतमा टिकटक बनाउनेलाई २५ हजार देखि १ लाख सम्म पुरस्कार (भिडियो हेर्नुस्)